China Non / Nkịtị pụrụ iche ụlọ ọrụ na-emepụta | Jitai
Ihe ngwugwu Aluminom
Uru nke alloy alloy bụ ịdị arọ ya, ike siri ike, na ịdị mfe nke nwere ike ịkpụzi. Dị ka ndị dị otú ahụ ọ na ọtụtụ-eji na n'ichepụta nke electronic nkwakọ.
• Obere njupụta
• Ezi platability na workability, waya ọnwụ, egweri na elu gold plating nwere ike rụrụ.
NLEREANYA Enyemaka nke mgbatị na-agbatị / × 10-6 / K Nkịtị omume / W · (m · K)-1 Njupụta nke / g · cm-3
A1 6061 22.6 210 Ugboro abụọ
A1 4047 21.6 193 Ugboro abụọ
Aluminium Silicon Metal nchịkọta
Si / Al alloys maka ngwugwu elektrọnik na-ezo aka na ihe ndị eutectic alloy nwere ọdịnaya silicon nke 11% na 70%. Njupụta ya dị ala, ọnụọgụ nke mgbasawanye ọkụ nwere ike dakọtara na mgbawa na mkpụrụ, yana ike ịgbasa okpomọkụ dị oke mma. Ya machining arụmọrụ bụkwa ezigbo. N'ihi ya, alloy Si / Al nwere ikike dị ukwuu na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa kọmputa.
• Mgbasa ọkụ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa na ikuku ọkụ dị elu nwere ike idozi nsogbu mgbasa ọkụ dị na mmepe nke ngwaọrụ ndị nwere nnukwu ike.
• A na-achịkwa ọnụọgụ nke mgbasawanye ọkụ, nke na-eme ka o kwe omume na nke mgbawa, na-ezere oke nrụgide ọkụ nke nwere ike ime ka ngwaọrụ daa.
Ochie aha njirimara CE Alloy mejupụtara CTE ， ppm / ， 25-100 ℃ Njupụta, g / cm3 Omume Obi na 25 ℃ W / mK Bend Ike ， MPa Ekwe Ike ， MPa Na-agbanwe Modulus ， GPa
EC20 Al-12% Si 20 Ugboro abụọ
EC17 Al-27% Si 16 Ugboro abụọ 177 210 183 92
EC17M Al-27% Si * 16 Ugboro abụọ 147 92
EC13 Al-42% Si 12.8 Ugboro abụọ 160 213 155 107
EC11 Si-50% Al 11 2,5 149 172 125 121
EC9 Si-40% Al 9 Ugboro abụọ 129 140 134 124
EC7 Si-30% Al 7.4 2.4 120 143 100 129
Diamond / Copper, Diamond / Aluminom
Diamond / Copper and Diamond / Aluminom bụ ihe ndị mejupụtara na diamond dị ka ihe nkwado na ọla kọpa ma ọ bụ aluminom dị ka ngwongwo matriks. Ihe ndị a bụ asọmpi na ngwa nrụpụta elektrọnik. Maka ụlọ diamond / ọla kọpa na diamond / aluminium, ụlọ nrụpụta nke mpaghara mgbawa bụ -500W / (m • K) -1, na-emeju arụmọrụ chọrọ nke ikpo ọkụ ọkụ nke sekit ahụ. Site na mgbasawanye na-aga n'ihu nke nyocha, ụdị ụlọ ndị a ga-arụ ọrụ dị mkpa na ngalaba nke ngwugwu kọmputa.
• Igwe ọkụ dị elu
• Enwere ike ịchịkwa ọnụọgụ nke mmụba ọkụ (CTE) site na ịgbanwe oke ọnụọgụ nke ihe diamond na ihe Cu.
• Ezi platability na workability, waya ọnwụ, egweri na elu gold plating nwere ike rụrụ
NLEREANYA NDEF KWES OFR OF OFB THR TH ERB /R / / × 10-4 / K Omume na-adakarị / W · (m · K) -1 Njupụta nke / g · cm-3
DIAMOND60% -ỌKA 40% 4 600 4.6
Aluminom nitride seramiiki bụ teknuzu teknuzu teknuzu. O nwere ihe omuma magburu onwe ya, ihe igwe na eletriki, dika oke eletriki eletriki, obere ihe di iche iche di iche iche, onu ogugu ndi mmadu na ndi ozo, ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu. Ọ naghị egbu egbu ma sie ike. Site na mmepe nke igwe microelectronic, aluminom nitride ceramik dị ka ihe ndabere ma ọ bụ maka ụlọ nke ngwugwu ahụ, na-ewu ewu. Ọ bụ nkwa elu-ike integrated circuit mkpụrụ na nkwakọ ihe onwunwe.
• Igwe ọkụ dị elu (ihe dịka 270W / m • K), dị nso na BeO na SiC, na ihe karịrị ugboro 5 nke Al2O3
• The thermal mgbasa ọnụọgụ ọkụ Si na GaAs
• magburu onwe eletriki Njirimara (dịtụ obere dielectric mgbe niile, dielectric ọnwụ, olu resistivity, dielectric ike)
• High n'ibu ike na ezigbo machining arụmọrụ
• Ezigbo ngwa anya na ngwa ndakwa nri njirimara
• Na-anaghị egbu egbu
Nke gara aga: Nchịkọta
Osote: Nchịkọta HIC